Home News Abaanduulle Caanood oo Qas iyo Fowdo ka dhex-bilaabay Ciidamadda Xoogga iyo kala...
Abaanduulle Caanood oo Qas iyo Fowdo ka dhex-bilaabay Ciidamadda Xoogga iyo kala shaki xoogan oo jira+Saraakiil la qaarajin rabay!!
Shalay qarax ayaa gaarigiisa loogu xiray Sargaal ka tirsan Ciidamadda Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabo cali cariif,gaarigiisa ayaa la sheegay in looga tagay Xero Ciidan oo ku taala Balcad ka dibna Qaraxa loogu xiray.
Arinkaani ayaa waxaa uu dhaliyay kala shaki xoogan oo soo kala dhexgalay Ciidamadda Xoogga dalka gaar ahaan kuwa ku Sugan Gobolka sh/dhexe,waxaana arinkaani uu dhaliyay in Ciidamadda la kala Raro.
Saraakiisha Ciidamada ayaa waxaa ay inoo sheegeen in Sababta cabsida keentay ay tahay in lagusoo daray,rag aan la aqoon halka laga keenay hase’yeeshee uu adeer u yahay C/laahi caanood.
Ciidamadda Xooga oo ahaa Ciidamada kaliya ee lagu kalsooni qabay ayeey hada u ektahay lagu milay rag ka tirsan Al-shabaab si look ala dilo
Previous articleAl-shabaab oo amar kusoo rogtay Ganacsatada Wadada Sodonka Ee Magaalada Muqdisho !!
Next articleWaasidee Maanta Xaalka Magaalada Jigjiga?
Muqdisho oo Maanta Mashquul ah iyo Xildhibaanadda Mooshinka Diidan oo...